La kulan Wordpress.com cusub, Calypso! | Laga soo bilaabo Linux
Arturo Herrera | | GNU / Linux, Noticias
Sida dad badani hore u ogaayeen WordPress lagu yaqaan inuu yahay nidaam maarayn maadadeed (CMS) oo ay adeegsadeen malaayiin dad ah, oo diiradda lagu saaray in loo isticmaalo oo keliya abuurka baloogyada laakiin sidoo kale nooc kasta oo degel ah. Waxaa soo saaray oo ay dayactirtay shirkadda Automattic, oo ku hoos qoran luqadda PHP, iyadoo u adeegsanaysa MySQL maareeyaha keydka macluumaadka iyo Apache adeeg ahaan ka hoosaysa rukhsadda GPL, taas oo ah, nidaamku wuxuu u hoggaansamayaa astaamaha il furan ee loo adeegsaday barnaamijka bilaashka ah.
Sida ku xusan Calypso gebi ahaanba beddelay sida aan u eegno WordPress, daabacaadda, isku xirnaanta adeegyada kale iyo barnaamijyada, soo gelinta sawirrada waxyaabo kale oo badan waxay muujineysaa waji cusub, kaas oo kaa caawin doona inaad noqoto mustaqbalka shirkadda Automattic iyo WordPress.com.
Waa in la ogaadaa in Calypso la xiriiri doonin WordPress.com, maadaama interface-ka aan laga dhex heli doonin nidaamka dhexdiisa laakiin uu la falgalayo xudunta WordPress iyada oo loo marayo wicitaanada API waxay sidoo kale bixin doontaa WordPress.org cusub, cusub iyo waayo-aragnimo gebi ahaanba cusub marka la maareynayo bogagga shabakadaha WordPress.
Marka laga soo tago dhammaan wixii aan soo sheegnay, kooxda Automattic waxay rabeen inay sii yara sii socdaan waxayna sii daayeen nooca desktop-ka ee Linux. Ahaanshaha gebi ahaanba isku dhufashada oo aad ku maamuli karto boggaga internetka oo dhan hal interface, ama biraawsar WordPress.com ama ka soo baxa arjiga kombuyuutarkaaga.
Faa'iidooyinka ay bixiyaan isbedeladan waxaa ka mid ah dhinacyada soo socda:
Calypso Waxay ka dhigeysaa shaqadeena mid sahlan iyadoo la siinayo taageero degmooyin badan hal interface.
Isbedelada ayaa ku jira waqtiga dhabta ah, muhiim maahan in la cusbooneysiiyo bogga.
Gabi ahaanba waa wax-ku-ool (la qabsan karo), waxaa si cajiiba loogu isticmaali karaa qalab kasta oo aad rabto meel kasta oo aad rabto inaad noqoto.
Horumarku waa gabi ahaanba ilo furan waxaana lagu martigaliyay mid ka mid ah adeegyada ugu caansan waxaana loo isticmaalay sidii aan u haystay Github. La heli karo, furan oo loo horumariyey dhammaan bulshada.
Si aad uga isticmaasho qalabkan nidaamka hawlgalka Linux, raac talaabooyinkan:
Tallaabada Koowaad: Gali bogga https://developer.wordpress.com/calypso/ oo xulo badhanka soo dejinta.
Tallaabada Labaad: bogga kore waxaad ka heli kartaa noocyada OSX, Windows iyo Linux, oo la heli karo. Kaliya dooro xulashada Download-ka ee Linux.
Tallaabada Saddexaad: Xullo xirmada aad jeceshahay oo bilow dejinta.
Talaabada Afaraad: Ku rakib barnaamijka la soo dejiyey oo bilow inaad ku raaxaysato nidaamkan cajiibka ah.
Waa in la ogaadaa in WordPress uu sii wadi doono ka shaqeynta server-yada maxalliga ah, marka lagu daro dhowr shirkadood oo martigeliya sida webempresa Waxay bilaabeen inay bixiyaan adeegyo khaas ah oo loogu talagalay WordPress ee Isbaanishka. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isticmaasho oo aad ku raaxeysato dhammaan faa'iidooyinka cusub ee qalabkani ku siinayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » La kulan WordPress.com cusub, Calypso!
Mary Gala dijo
Anigu waxaan ahay isticmaale interface-ka cusub ee wordpress inkasta oo aan u arko mid aad u xiiso badan, dhibaato ayaan qabaa taasna waxay tahay in aanan heli karin meel aan ku doorto wijigyada bogaggeyga.
Milyan mahadsanid !!
Ku jawaab María Gala
Aniga ahaan, Wodpress waxay dhimatay markaan la kulmay Ruuxa, ka fudud, ka fudud kana qurux badan. Iyadoo Markdown ugu talagal ahaan. Qofna meeshaas igama soo dejiyo.
Waa maxay cirfiid? ma ku rakibi kartaa martigelin?
Ku jawaab Tecnopymes
Maxaan sameynaa kuwa ka dambeeya wakiil si aan isugu xirno. Kaliya waxay u ogolaaneysaa adeegsiga wakiil laakiin wakiilkeygu wuxuu leeyahay sugitaan sidoo kale ma doonayo inaan isticmaalo dhoofinta = ... mar kasta oo aan u baahdo.